China Heather Jersey knit melange warshadeeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huasheng
Shaadhkan heather knit melange ka samaysan fidsan, maqaalkeena lambarkiisu yahay FTT-WB248, waxa lagu toleeyey 8% spandex (elastane) iyo 92% polyester.
Dharka fidsan ee mélange ayaa leh midabyo kulul halkii ay ka ahaan lahaayeen midabada adag ee caadiga ah.Dharka funaanadda Heather waxa lagu tolan yahay fiilooyinka isku dhafan kuwaas oo iskutallaabta lagu midabeeyay si ay u abuuraan saameyn kulul.Midab badan oo cawl ama cawl leh oo midab kale leh ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa.Waxa jira midabyo Heather oo soo socda ayaa diyaar u ah dharka funaanadda hiwaadhka wakhtigan xaadirka ah.
Dharkan melange-ga ah wuxuu u fiican yahay lugaha, kululeeyaha lugaha, gaaban isboortiga, nigisyada, kabaha isboortiga.Waxay ka fogaynaysaa qoyaanka jidhka waxayna ka hortagtaa nuugista urta.Dharka fidsan ee funaanadda heather knit melange waxay ka ilaalin doontaa qallayl iyo ur la'aan inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jireed ee qofka xidhan.Aad bay u raaxo badan tahay in la xidho.
Si loo daboolo heerarka tayada adag ee macaamiisha, dharka mélange-gan waxaa soo saaray mashiinnadayada wareegyada casriga ah ee casriga ah ee laga keenay Yurub.Mashiinka tolida ee xaalad wanaagsan ayaa hubin doona tolida wanaagsan, fidsan wanaagsan, iyo muuqaal cad.Shaqaalaheenna khibradda leh ayaa si wanaagsan u daryeeli doona dharkan melange min greige ilaa mid dhammeeyey.Wax soo saarka dhammaan dharka melange wuxuu raaci doonaa habab adag si loo qanciyo macaamiisheena ixtiraamka leh.
Hore: Soo saaraha OEM Stretch Jersey Knit Fabric - 87 Polyamide aty 13 elastane fidsan dharka yoga ee lugaha - Huasheng
Xiga: Dharka funaanadda cationic polyester spandex melange